इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई भाडा बढ्यो « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै हवाई भाडा बढ्यो
नेपाल आयल निगमले गत फागुन ४ देखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु दुई बढाउने निर्णय गरेकाले हवाई इन्धनको मूल्य जे-जति घटबढ हुन्छ सोही अनुपातमा स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य लागू गर्ने निर्णय भएको सङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
निर्णय अनुसार सङ्घमा आबद्ध वायु सेवा कम्पनीले फागुन ८ गतेदेखि नयाँ इन्धन मूल्य लागू गर्नेछन् । सो विषयमा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत प्राप्त भई आएकाले हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार साविकको प्रतिलिटर ६५ बाट वृद्धि भई ६७ कायम गरिएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य बढेकाले सबै गन्तब्यको उडानमा थोरै मात्रामा हवाई भाडादर वृद्धि गरिएको सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले बताए ।
उनका अनुसार हवाई इन्धनको मूल्य बढेअनुरुप सबैभन्दा लामो गन्तब्य अर्थात् काठमाडौं-धनगढीका लागि ९० बढेको छ । काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको गन्तब्यमा न्यूनतम १० वृद्धि गरिएको छ भने काठमाडौँबाट हुने पर्वतीय उडानमा ७० बढेको छ ।
टीभीएस स्टार सिटी प्लसको टिजर सार्वजनिक, छिटै बजारमा आउँदै !
टीभीएस कम्पनीले टीभीएस स्टार सिटी प्लसको टिजर पनि सार्वजनिक गरेको छ । सो टिजरमा बाइकको
विपक्षीलाई ‘काउन्टर’ दिनेगरी रणनीति बनाउन ओली पक्षीय संसद्हरुको भेला पाँच तारे होटलमा !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुको राजधानीको पाँच तारे होटलमा
सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासले सरकारद्वार बिघठित प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गरिदिएपछि उक्त संसदको बैठक आह्वान लगायतका निर्णय
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । आज साँझ ५ बजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास